महोत्सवमा भुईँ स्याउमा दर्शको भीड – Saurahaonline.com
महोत्सवमा भुईँ स्याउमा दर्शको भीड
चितवन, १९ माघ । पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा जारी रत्ननगर महोत्सवमा ‘ग्राउण्ड एप्पल’ अर्थात भुईं स्याउको स्टलमा दर्शकहरुको भीड बढेको छ । झट्ट हेर्दा तरुल जस्तै देखिने भुईं स्याउ नयाँ र उपयोगी फलफूल भएकाले पनि यसले दर्शकहरुको ध्यान खिचेको हो ।
अहिले महोत्सवको स्टल नम्बर ८२ मा ग्राउण्ड एप्पल राखिएको छ ।
चैतदेखि वैशाख महिना भित्रमा रोप्नुपर्ने यस स्याउ ५ डिग्री सेन्टीग्रेड देखि २४ डिग्री सेन्टीग्रेडसम्मको तापक्रम हुने क्षेत्रमा खेती गर्न सकिने बताइन्छ । समुन्द्री सतहको एक हजार पाँच सय मिटरदेखि दुई हजार आठ सय मिटरसम्मको उचाईमा रोप्न सकिने भुईं स्याउको जरा, बोट तथा पुरै बोट उपयोगी मानिन्छ ।
पाचनक्रिया सक्रिय गर्न शक्तिबद्र्धक मानिने भुईं स्याउ क्यान्सर रोगसँग लड्न पनि प्रभावकारी मानिन्छ । रक्तचाप नियन्त्रण गर्न उपयोगी भएको भुईं स्याउमा ६० देखि ७० प्रतिशत इल्सुलिन पाइने हुँदा मधुमेहका बिरामीहरुलाई पनि फाइदाजनक रहेको छ । यसलाई सुपर न्यूट्रिसन्स र हिलिङ प्लान्टको रुपमा पनि चिन्ने गरिएको छ । भुईँ स्याउ सलाद, जुस, पातको चिया, सिरप, वाइन, रक्सी, क्लुनरी, स्नेक्स तथा कन्फेक्सनरी लगायतका खाद्यवस्तु बनाउन समेत उपयोगी खाद्य वस्तु हो ।
अहिले रत्ननगर महोत्सवमा भुईंँ स्याउको स्टल राखेका सोनसा एग्रो फार्मका सञ्चालक ओम बहादुर रोक्काका अनुसार चैतमा लगाउने यस स्याउ, जेठ÷असारमा गोड्ने र पुस महिनामा खानको लागि तयार हुने गर्दछ । सुरुमा २८ रोपनी क्षेत्रफलमा भुईँ स्याउको खेती गरेका रोक्काका अनुसार २८ रोपनीबाट न्यूनतम छ लाख रुपैयाँदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गर्दछ । पहिलो वर्ष मात्र लगानी गरे पुग्ने यस भुईंँ स्याउ पोखरा, काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र बुटवलमा सर्वसाधरणलाई बेचविखन गर्न सुरु गरिएको छ । होटल तथा विदेशमा यसको निर्यात बढाउने सोच बनाएको रोक्काले बताए ।
निजी सवारी चितवनमा जोर विजोर, पसल हप्ताको तीन दिन, के खुल्ने के नखुल्ने ? २०७८, ९ असार बुधबार
अफगान सेनाको कारबाहीमा १४ तालिबानीको मृत्यु २०७८, ९ असार बुधबार
बीएसएफ जवानहरूको ऊँटहरूलाई लडाएर माथि बसी योग गरेपछि आलोचना २०७८, ९ असार बुधबार
चीनद्वारा चार कम्पनीलाई कोभिड–१९ को खोप बिक्री अनुमति २०७८, ९ असार बुधबार
दक्षिणकालीमा सन्तोषी सुब्बाको क्रुर हत्या २०७८, ९ असार बुधबार
लश्करका सस्थापक हाफिज सईदको घर नजिक बम विष्फोट हुँदा दुईको मृत्यु , १४ जना घाइते २०७८, ९ असार बुधबार
निजी सवारी चितवनमा जोर विजोर, पसल हप्ताको तीन दिन, के खुल्ने के नखुल्ने ?
चितवन, : जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधन जोडर विजोर सञ्चालन.....
बीएसएफ जवानहरूको ऊँटहरूलाई लडाएर माथि बसी योग गरेपछि आलोचना
दक्षिणकालीमा सन्तोषी सुब्बाको क्रुर हत्या
लश्करका सस्थापक हाफिज सईदको घर नजिक बम विष्फोट हुँदा दुईको मृत्यु , १४ जना घाइते
चुडामणी शर्मासहित तीन जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा १ अर्ब ३३ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर